BIODERMA | BIODERMA သည် NAOS ၏ အရေပြားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ထုတ်ထားသော brand ဖြစ်သည်။
BIODERMA သည် NAOS ၏ အရေပြားဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ထုတ်ထားသော brand ဖြစ်သည်။
“လိုအပ်သည်များကို ပိုမိုကုသခြင်းထက် သင့်တော်သော နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရမည်”
ဟူသော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ပြင်သစ်ဆေးဝါးနှင့် ဇီဝဗေဒပညာရှင် Jean-Noël Thorel က အရေပြား ထုတ်ကုန် brand များကို NAOS အနေဖြင့် စုစည်းဖန်တီးခဲ့သည်။
NAOS အကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်။
နေ့စဉ် အရေပြားသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲရသောကြောင့် အရေပြား၏မျှတမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသည်။ ညစ်ညမ်းမှု၊ မိုးလေဝသ၊ UV ရောင်ခြည်များ၊ ဖျားနာခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်း၊ အသက် အရွယ်ကြီးရင့်ခြင်းတို့ကြောင့် အားနည်းလာပြီး သဘာဝအကာအကွယ်လွှာ ပျက်စီးလာသည်။ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး DNA ပေါ်မူတည်၍ အရေပြားတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကာ အမှတ်၊ နီမြန်းမှု၊ ယားယံမှုတို့ကို ပိုမိုဆိုးတတ်ပါသည်။
ဇီဝကမ္မဗေဒကို အခြေခံတဲ့ brand ဖြစ်တာကြောင့် BIODERMA သည် အရေပြား၏ အခြေခံလုပ်ငန်းဆောင်တာများ အကြောင်းကို နားလည်သိရှိပြီး ပြဿနာတခုချင်းစီ၏ အဖြေကို ပေးနိုင်ပါသည်။ BIODERMA တွင် အရေပြား၏ကျန်းမာရေးသည် အခြေခံဖြစ်သည်။
NAOS ၏ အဓိကဖြစ်သော ဇီဝကမ္မဗေဒ
NAOS သည် လူသားအကျိုးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ဂေဟစနစ်နှင့် ဇီဝဗေဒသည် လူအချင်းချင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်နွယ်နေသော ဇီဝကမ္မဗေဒကို အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သဘာဝအတိုင်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုကိုရရှိရန်၊ ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီ အရေပြားကို အကူအညီပေးပြီး မညီမျှမှုဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာကို တိုက်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လူသားတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် NAOS ၏အောက်တွင် BIODERMA, Institut Esthederm နှင့် Etat Pur တို့ကို ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု: ကောင်းမွန်သော ဖော်မြူလာ
သဘာဝတရားကိုမလွန်ဆန်ဘဲ ဖော်မြူလာကို ကျန်းမာသော အရေပြားဖြစ်အောင် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်း၊ တိကျသော ပမာဏ ဖြစ်အောင် ရွေးချယ်ရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားသည်။
ဘယ်လိုအရေပြားဖြစ်ဖြစ် ရေရှည်အသုံးဝင်စေရန် အရေပြား၏ သဘာဝလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုပါထည့်စဉ်းစားရမည်။
အသားအရေအားလုံး၏ ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းကို လေ့လာခြင်း
တိကျကောင်းမွန်သော ရလဒ်ရရှိအောင် အရေပြား၏ အတွင်းနှင့်အပြင်မှ အချက်အလက်များကို အသေးစိတ် စဉ်းစားထားသည်။
အရေပြား၏ သဘာဝလုပ်ငန်းကို အားဖြည့်ပေးခြင်း
အရေပြား၏ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်း၊ လိုအပ်သည့် ပမာဏ၊ အတွေ့အကြုံ၊ နေ့စဉ် အသုံးပြုရလွယ်ကူမှု စသည့် အချက် (၄) ချက်ကို မျှဝေအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
ရောဂါလက္ခဏကိုသာမက ရောဂါဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရာကိုပါကုသခြင်း။
အရေပြား၏ ကာကွယ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း မြင့်မားစေရန်နှင့် ကြာရှည်ခံနိုင်ရန် သန့်စင်ပြီး အရည်အသွေး မြင့်မားသော ပစ္စည်းများကိုသာ ရွေးချယ်ထည့်သွင်းထားသည်။
အရေပြား၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် သဘာဝတရားကို အခြေခံထားခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အရေပြားထဲတွင်သာရှိသည့် ပစ္စည်းများနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဆင်တူသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သုံးထား သည်။ အရေပြားပြဿနာများအတွက် လိုအပ်သည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသာသုံးစွဲသည်။
ဆိုလိုရင်းမှာ ကျွန်ုတို့ ထုတ်ကုန်များသည် ပွင်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် အရေပြားကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းမှုပြုပြီး ဓာတ်မထည့်မှုများ လျော့ချပေးထားသည်။
- ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေနေနိုင်အောင်ကူညီခြင်း
Dr Sandra Skotnicki, Toronto တက္ကသိုလ်၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ - ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအရေပြား၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာရေးဌာန။.
“ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်သည် လူသားနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ဆက်နွယ်မှု၊ အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုကြား ဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။”
BIODERMA, Institut Esthederm နှင့် Etat Pur တို့ကို ထုတ်လုပ်ထားသည်။
ကျန်းမာသော အရေပြားကို ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်ရန် အရေပြားဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်
အပိုအလိုမရှိ အရေပြား၏ လိုအပ်ချက်အတွက် ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ထုတ်ကုန်။
ထိန်းသိမ်းမှုပထမ။ ကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှသော ရည်ရွယ်ချက်။
BIODERMA သည် အသားအရေအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော NAOS ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦးချင်း၏ နေထိုင်မှုဘဝကောင်းမွန်အောင် အထူးဂရုပြုသည်။ နေ့စဉ် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင် သော အရေပြားအတွက် ကောင်းမွန်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်အောင် အမြဲကြံဆနေပါသည်။
“ထိန်းသိမ်းမှု ပထမ” ဆိုသည့် စကားအတိုင်း အရေပြားကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပါသည်။
NAOS မှ ပုံစံရေးဆွဲထားသော BIODERMA ၏ အရေပြားဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို ပြင်သစ်တွင်သာထုတ်လုပ်သည်။
Aix-en-Provence တစ်နေရာတွင်သာ NAOS ၏ ထုတ်ကုန်၊ သုတေသနနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သောကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရသောပစ္စည်း၊ ထုတ်ပိုးမှုကွင်းဆက်များကို အာမခံနိုင်သည်။ NAOS သည် ဆေးဝါးထုတ်ကုန်စက်ရုံများ၏ အရည်အသွေးကိုလိုက်နာပြီး ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များ၏ အရည်အသွေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ တွင် ထိပ်တန်းဖြစ်သည်။
ထုတ်ကုန်များ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို လုံးဝပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း
NAOS သည် ထုတ်လုပ်မှုဖော်မြူလာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး အရေပြား၏ လုံခြုံရေးကို ဦးစားပေးသည်။
Ask. NAOS.com တွင် အကုန်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သဘာဝပုံစံ (ဗီတာမင်၊ အပင်ထုတ်၊ ဆီ၊ ထောပတ်, စသဖြင့်)
အရင်းအမြစ် (အပင်ထုတ်၊ တွင်းထွက် လူလုပ်, စသဖြင့်)
အရေးပါပုံ (အာဟာရဖြည့်ပေးမှု၊ နာကျင်ခြင်းသက်သာစေမှု၊ သန့်စင်မှု၊ စသဖြင့်)
ဤအကြောင်းများကို Ask. NAOS .com (သို့) QR ကုဒ် စကန်ဖတ်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။
Ask.NAOS.com တွင် သင်ကိုယ်တိုင် မှန်ကန်သောပစ္စည်း၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကောင်းမွန်စွာအသိပေးထားခြင်းဆိုသည်မှာ သင်နှင့်အသင့်လျော်ဆုံးထုတ်ကုန်ကို သင်ကိုယ်တိုင်‌ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်များ၏ ပါ၀င်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန်
Ask.NAOS.com တွင်သွားရောက်၍ သင်ကိုယ် တိုင်မေးမြန်းနိုင်သည်။